Ciudad Rodrigo, greatရာမအမွေအနှစ်များနှင့်လှပသောသဘာဝ | ခရီးသွားသတင်း
Salamanca မြို့ Ciudad Rodrigo ကကြေငြာခဲ့သည် သမိုင်း - အနုပညာ Complex ၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင် Castile ၏အနောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးတွင်အထင်ရှားဆုံးသောအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြေးနီခေတ်ကတည်းကနေထိုင်ခဲ့သည်မှာ၎င်းသည်ဗက်တန်နယ်မြေများနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ရောမလူမျိုးတို့၏နယ်မြေဖြစ်သည်။ Miróbriga။ အလယ်ခေတ်အတွင်းတွင်၎င်းသည်ပေါ်တူဂီနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောမြို့တစ်မြို့အနေဖြင့်အများမြင်တွေ့ခဲ့သောအမြင်များကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းတွင်၎င်းကိုနှစ်ကြိမ်ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲ.
ထိုကဲ့သို့သောကြွယ်ဝသောသမိုင်းသည်စီဒီဒက်ရိုဒီဂိုတွင်မြှုပ်နှံထားသောနမူနာအမြောက်အများကျန်ရှိနေသည်။ Siega Verde ရှိဂူပန်းချီကားများ၊ အဆိုပါဝက်နှင့်ရောမတို့၏အကြွင်းအကျန်များသည်ထိုကဲ့သို့သောထဲတွင်တွေ့နိုင်သောအရာများဖြစ်သည် Saelices el Chico ဆိုဒ်။ အထူးသဖြင့်မြို့တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားထူးခြားသောတန်ဖိုးရှိသည့်အမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အဆောက်အအုံများကိုပေးထားသည်။ သင်သမိုင်းဝင်မြို့ကိုသိလိုလျှင် Salamancaကျွန်ုပ်တို့ကိုဖိတ်ကြားပါရန်။
1 အဘယ်အရာကို Ciudad Rodrigo တွင်ကြည့်ပါ
1.1 ဟင်နရီ II ၏ရဲတိုက်
1.2 Ciudad Rodrigo ၏နံရံများ
1.3 Santa Maria ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
1.5 Ciudad Rodrigo ၏နန်းတော်
1.7 Ciudad Rodrigo ၏ပတ်ဝန်းကျင်
2 ဘယ်အချိန်မှာ Salamanca မြို့ကိုသွားလည်ပတ်တာပိုကောင်းမလဲ
3 Ciudad Rodrigo မှာဘာစားရမလဲ
အဘယ်အရာကို Ciudad Rodrigo တွင်ကြည့်ပါ
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ Castilian မြို့ဟာသမိုင်းဝင်အနုပညာဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကုန်ပစ္စည်းများ။ ဒီလိုကြီးမားတဲ့အမွေအနှစ်တွေထဲမှာမင်းတို့သင်လည်ပတ်ရမယ့်အထင်ရှားဆုံးသူတွေကိုပြပေးပါမယ်။
ဟင်နရီ II ၏ရဲတိုက်
မြို့၏အမြင့်ဆုံးသောနေရာမှလွှမ်းမိုးထားပါ။ ထူးဆန်းသည်မှာ၎င်းကိုarchကရာဇ်က၎င်း၏အမည်ကိုပေးသောအမိန့်ဖြင့်မဟုတ်ဘဲ၊ လီယွန်၏ဖာဒီနန် II ကို, Enrique II ကပြန်လည်တည်ဆောက်ပေမယ့်။ ၎င်း၏အဓိကဝင်ရိုးသည် အခွန်ဆက်၏မျှော်စင်အထပ်နှစ်ခုနှင့် ၁၇ စတုရန်းမီတာပတ်လည်ရှိသည်။ သင်ကအလယ်အလတ်တန်းစားမင်းသားတစ် ဦး လိုပဲအဲဒီမှာညတည်းခိုမှာကိုသင်လုပ်နိုင်တယ်၊
Ciudad Rodrigo ၏နံရံများ
၎င်းတို့သည် ၁၂ ရာစုတွင်ဖာနန်ဒို ၂ ၏မူလအမိန့်အရတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာနှစ်ကီလိုမီတာထက်ပိုတယ်။ သို့သော် ၁၇ ရာစုတွင်အံသွားများဖွဲ့စည်းထားသည့်အပြင်ဘက်ခံတပ်များကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ လောလောဆယ်သင်ကြည့်နိုင်သည် တံခါးငါးပေါက်: Santiago, Colada, Amayuelas, del Conde, del Sol နှင့် Sancti Spiritus သူများ။ ယခင်ကဘုရင်ဟုခေါ်သည့်တံခါးပေါက်တစ်ခုလည်းရှိပြီးဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှေ့တွင်ရှိ၏။
၎င်းသည် Ciudad Rodrigo ၏သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၄ ရာစုတွင်ပြီးဆုံးခဲ့သော်လည်းဖာနန်ဒို ၂ လက်အောက်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ဗိသုကာပုံစံဖြစ်သည် Gothic သို့အကူးအပြောင်း Romanesque။ ၎င်းသည်ခေါ်သည့်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများတွင်လည်းပါဝင်သည် Salamanca အုပ်စု အရာ၌လည်းဤမြို့၏ဟောငျးဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်ကြသည် Zamora နှင့်လှပသော Collegiate ဘုရားကျောင်းဘုရားကျောင်း။
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်အတွင်းမှာမင်းကြည့်သင့်တယ် သံပြိုင်, ကြောင့် plateresque စတိုင်တစ်ခုအလုပ် Rodrigo Aleman; ၎င်း၏ချွန်မုတ်များအတွက် Gothic အဘိဓါန်စတိုင် cloister နှင့် Diocesan ပြတိုက်ရှေးဟောင်းသုတေသနအမွေအနှစ်များနှင့်ရောမစကျင်ကျောက်ယဇ်ပလ္လင်နှင့်သက်ဆိုင်ရာ numismatic စုဆောင်းမှု၊ ပန်းပုနှင့်ပန်းချီလက်ရာများပါဝင်သည်။
Ciudad Rodrigo ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
Ciudad Rodrigo တွင်အလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောတန်ဖိုးရှိသည့်အခြားဘုရားကျောင်းများကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ ဒါဟာအထင်ကြီး၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် Cerralbo ChapelMarrer Benlliure မှပန်းပုရုပ်တုများပါရှိသော ၁၇ ရာစုတွင် Herrerian ဆောက်လုပ်ရေးကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၏ San Andrés၏ Romanesque ဘုရားကျောင်း; ၏ San Pedro ၏တစ် Mudejar Romanesque apse နှင့်အတူ စန်းCristóbal၏, အပြောင်အရံနှင့် Baroque ပန်းပုကိုထိန်းသိမ်း။
ထိုနည်းတူစွာသင်သည် Salamanca မွို့၌ကဲ့သို့သောကွန်ဗင်းရှင်းများရှိသည် San Agustín၏တ ဦး တည်း, XNUMX ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်နှင့် Barefoot Franciscan ၏Manuel de Larra Churriguera နှင့်ဆက်နွယ်သော ၁၈ ရာစုမှဖြစ်သည်။
Ciudad Rodrigo ၏နန်းတော်
အကယ်၍ သင်သည် Ciudad Rodrigo တွင်တစ်ခုခုရှာမည်ဆိုပါကနန်းတော်များစွာနှင့်မြင့်မြတ်သောအိမ်များနှင့်အတူရှိ၏။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြား Carthage ၏ Marchioness ၏, XIX ရာစု၏ Neo- Gothic; Velasco မှတ o Ávilaနှင့် Tiedra ၏။ သို့သော်၎င်းတို့ထဲမှအလှပဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် လင်းယုန်နန်းတော်Mozarabic alfiz မှတည်ဆောက်ထားသည့် Plresque ဟင်းလင်းပြင်နှင့် voussoir မျက်နှာစာပါသောအထင်ကြီးလောက်သော Renaissance ပုံစံ။
မြင့်မြတ်သောအိမ်များကိုသင်မြင်နိုင်ပါသည် Cerralbo ၏ပထမဆုံး Marquis ၏၁၆ ရာစုမှ Cadena၊ Sexmeros နှင့်Vázquezတို့၏၊
ရာစုနှစ်နှစ်ခုအကြာတွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ၁၆ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောဤဆောက်လုပ်ရေးသည်စောင့်ရှောက်ရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည် စိန့်ဂျွန်၏အမိန့်။ သိချင်စိတ်ကအဖွဲ့အစည်း၏ငွေကြေးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသောလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်စားပြုရန်ဟာသတရားရုံးတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်း၏ Chapel တွင် XNUMX ရာစုလက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်ဖိလစ်ပိုင်မှယူဆောင်လာသည့်ဆင်စွယ်ကောင်းတစ်ခုအပျိုစင်လည်းရှိသည်။
Ciudad Rodrigo ၏ပတ်ဝန်းကျင်
အဆိုပါ Salamanca မြို့အားဖြင့်ရေချိုးသည် အာဂူဒါမြစ်အများအပြားရှိပါတယ်ရာတဝိုက် ပန်းခြံများ အတူတူချိတ်ဆက်။ တကယ်တော့သူတို့ဟာ ၁၀ ကီလိုမီတာအထိရှည်လျားတဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်။ ပတ်ပတ်လည်တောင်တက်လမ်းကြောင်းလည်းရှိပါတယ်။ ဥပမာ, Cañada de las Vacas ၏လမ်းကြောင်း, Camino del Molino Carbonero သို့မဟုတ် Camino de Águeda del Caudillo ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Ciudad Rodrigo မှ ၁၅ ကီလိုမီတာသာဝေးသည် Siega Verde ရော့ခ်ဘူတာရုံအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအထက်ပန်းချီကားတစ်ချပ်ဖြစ်သည် လူသား၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်း။ Pedrotoro၊ El Valle နှင့်Rábidaတို့တွင်လည်းရှိသည် လင်းလက် အဆိုပါ megalithic ယဉ်ကျေးမှု၏။
ဘယ်အချိန်မှာ Salamanca မြို့ကိုသွားလည်ပတ်တာပိုကောင်းမလဲ
အဆိုပါ Salamanca မြို့တစ်ရှိပါတယ် သမုဒ္ဒရာတိုက်ကြီးရာသီဥတု။ ထို့ကြောင့်ဆောင်းရာသီသည်အအေးဖြစ်ပြီးညအချိန်၏အပူချိန်သည်အနုတ် ၁၀ ဒီဂရီအထိရှိနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်နွေရာသီသည်ခြောက်သွေ့။ အလွန်ပူပြင်းပြီးညအချိန်တွင်အေးမြသော်လည်းတစ်နေ့တာတွင် ၃၅ ဒီဂရီသို့အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သည်။ အများဆုံးမကြာခဏရွာသွန်းအတွက်ပေါ်ပေါက်ပါတယ် နွေ ဦး ရာသီနှင့်ကျလိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်လွန်ခဲ့သောရာသီဥတုနှစ်ခု၌မြို့တော်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
Ciudad Rodrigo မှာဘာစားရမလဲ
Mirobridge အစားအစာသည်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်သုံးမျိုးဖြစ်သောပဲ၊ ကုလားပဲနှင့်အာလူးများကိုအများဆုံးကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုတ်ကောင်းစတဲ့ဒေသထွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဟာဒီကိစ္စမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ပါတယ်။
မြို့ထဲမှာသင်မြည်းစမ်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးဟင်းလျာများထဲမှာ အာလူးနှိုးဆော်, ကြက်သွန်ဖြူနှင့်ကြက်သွန်ဖြူနှင့်အတူကြေမွပြင်ဆင်။ torreznos, ဒါမှမဟုတ်နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည် chanfainaကြက်သွန်၊ အရွက်၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့်ငရုတ်သီးပါသောသိုးသငယ်။
ထိုအခါသင်ရှိသည် farinato နှင့်အတူကြက်ဥကြော်ကနေဆီဥနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဝက်အူချောင်း Iberian ဝက် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ။ တိကျစွာဒီsaရိယာ၏ကြယ်ပွင့်ပန်းကန်ကိုကိုယ်စားပြု, ကင်, ဖုတ်, ဝက်အူချောင်းသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်လမ်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည်။ ပြီးတော့သူ့ဘေးမှာတခြားအသားတွေကြိုက်တယ် သိုးသငယ် Shanks သို့မဟုတ်သတ္တိနွား၏။
အချိုပွဲအတွက်, သင်ကြိုးစားရန်ရှိသည် perronillas, အရက်သယ်ဆောင်သောအချို့သောမုန့်ညက်; က Bollo Maimonအခမ်းအနားများအတွက်ရိုးရာ, က Mantecados; က ကွမ်းခြံကုန်းကြက်ဥ၊ နို့၊ မုန့်ညက်နှင့် anise ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊ က ကိုယ်ကိုကိုယ်နှိမ့်ချကြလော့ သို့မဟုတ် ပန်း.
တိုတောင်းခုနှစ်, Rodrigo စီးတီး သင့်တွင်သွားရောက်လည်ပတ်ရန်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးရှိသည်။ ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာနေရာများ၊ ကြွယ်ဝသောheritageရာမအမွေအနှစ်၊ ခိုင်ခံ့သောအရသာရှိသည့်အစာအိမ်နှင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ။ လှပသော Salamanca မြို့သို့ထွက်ပြေးရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » Rodrigo စီးတီး